Aiza ny faran'ny fantsom-barotra? | Martech Zone
Aiza ny faran'ny fantsom-barotra?
Alatsinainy Janoary 16, 2012 Alahady, Aogositra 19, 2012 Douglas Karr
Ny paikadim-barotra dia matetika natao hahitana Bebe kokoa mitarika na mampiakatra ny mpanjifa ankehitriny. Ny iray amin'ireo olana izay matetika hitantsika amin'ny mpanjifa dia matetika izy ireo dia miasa amin'ny faran'ny diso ny fantsom-pivarotana. Orinasa maro no tsy mahazo mpitsidika kely isam-bolana ao amin'ny tranonkalany noho izay tadiavin'izy ireo… fa raha afaka nanova indroa noho ny ankamaroan'ireo mpitsidika ananany izy ireo, dia hahita fahombiazana tokoa.
Maro amin'ireo teknolojia iarahanay miasa no namboarina mba hanafohezana ny fotoana ilaina hanovana ireo mpihaino kendrena na hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po isaky ny misy ny fivoahan'ny fantsona. Gaga foana aho fa antsoinay hoe cornel io… tena colander be dia be ny fiparitahan'ny vinavinan'izy ireo manerana ny toerana. Raha tokony hiasa eo an-tampon'ny fantsona ianao ary hitarika fitarihana bebe kokoa any amin'ny fantsom-pohy feno lavaka, aiza no ahafahanao mampiasa teknolojia eo ambanin'ny fantsona?
Ireto misy teknolojia vitsivitsy… ao anatin'izany ny sasany amin'ireo mpanjifanay sy mpanohana anay izay manampy:
Webmasters fitaovana manome fampahalalana mitsikera manampy anao hampitombo ny tahan'ny click-through amin'ny motera fikarohana. Efa mandinika ny habetsaky ny fikarohana ataon'ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ianao, saingy fantatrao ve ny tahan'ny tsindry amin'ny alàlan'ny laharanao ankehitriny? Azo hatsaraina ve?
Mpanafoana URL toa ny Bit.ly dia afaka manome anao ny angona ilainao hahitanao ny fahombiazan'ny paikadin'ny media sosialy. Fantatrao ve fa ny Facebook dia manivana ireo fidirana hitan'ny olona mampiasa azy Edgerank algorithm… ary mety hiteraka kely na kely aza tsy misy ny ezaka media sosialy aseho anao?
Orinasa automatisation marketing toy ny Right On Interactive dia mamolavola teknolojia manafohezana ny tsingerina ary manome fomba fiasa izay manampy anao hamaly ny fitarihanao mba hahafahanao mifandray amin'izy ireo amin'ny fomba mandaitra kokoa fa tsy batch sy fipoahana ny fomba mety handroahana dia mitondra ny fantsona.
Orinasa marketing amin'ny mailaka toa ny Delivra dia manolotra serivisy mailaka sy SMS izay afaka mampiakatra be ny tahan'ny valiny ary koa mampianatra ny mpanjifa ankehitriny ny fomba vokariny na ny indostria - manangana fahefana, mitazona ary mahazo fotoana miaraka amin'ny fitarihana.
Sehatra fanaovana fanadihadiana an-tserasera toy ny SurveyMonkey (izay nividy ny mpanjifanay, Zoomerang) dia afaka manome anao ny faharanitan-tsaina ilaina hanatsarana ny paikadim-barotra amin'ny atiny. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny atiny, azonao atao ny mikendry ny fitarihana azo antoka kokoa ho amin'ny fahazoana ary miantoka fa voakarakara tsara ny mpanjifanao.
Tolo-kevitra momba ny lozisialy ny rindranasa toa ny Tinderbox dia ahafahanao mandrindra sy manatsara ny fizotranao. Amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia ny valinteninao sy ny fahatakaranao ny fomba hanatsarana ny tolo-kevitrao dia afaka mitondra haingana kokoa sy mahomby kokoa ianao amin'ny fiovam-po… rehefa mampiasa loharanom-pahalalana anatiny kokoa ianao
Rehefa mijery ny Sales Funnel ianao, aiza ny paikadinao famoahana? Raha tokony hanandrana handroaka mpihaino bebe kokoa ianao dia misy ny mety fa tsy manararaotra ny mpanjifa sy ny prospect efa anananao ianao. Mendrika jerena!
Tags: delivramailaka Marketingautomation marketingmahitsy amin'ny interactivetandroka fivarotanatolo-barotratinderbox
Mora mora ny fitsapana ny Browser Cross
Jan 17, 2012 ao amin'ny 2: 47 AM
Tena marina izany Douglas. Ary ny tena zava-dehibe dia ny nankafiziko be loatra ny namaky ny lahatsoratrao. mba hitarihana mpihaino bebe kokoa, misy ny mety tsy hampiasanao ny mpanjifa sy ny fanantenana efa anananao. Ny zavatra iray nianarako talohan'ny nahatongavako ho mpanoratra be mpividy indrindra ary ela be talohan'ny nifidianan'ny Inc Magazine ny orinasako ho iray amin'ireo orinasa mitombo haingana indrindra dia ny fampiasana ireo teknolojia ireo dia azo antoka fa hahazo mpihaino bebe kokoa ho an'ny tranokala fivarotana an-tserasera.
Jan 17, 2012 ao amin'ny 3: 05 AM
Misaotra betsaka tamin'ny teny tsara nataonao, @DanielMilstein:disqus ! Ary eritrereto fotsiny hoe ohatrinona no mety ho tabataba any ivelany raha mifantoka amin'ny fanodikodinana ny fitarihana ananantsika isika fa tsy mandrotsaka spam bebe kokoa any.